Waalidiin Soomaali ah oo u bareeray in ay raadiyaan caruurtoodii ISIS ku biirtay - Jigjiga Online
HomeSomalidaWaalidiin Soomaali ah oo u bareeray in ay raadiyaan caruurtoodii ISIS ku biirtay
Waalidiin Soomaali ah oo u bareeray in ay raadiyaan caruurtoodii ISIS ku biirtay
Gabdho Soomaali ah oo haysta caruur ay u dhaleen dagaallamayaasha ururka la baxay dowladda Islaamka ayaa ku xayiran Suuriya. gabdhahaas waxay badankooda ka tageen dalalka Yurub, sida ay waalidiintooda sheegeen.
Waalidiinta waxay hadda dhisteen urur ay ku mideysan yihiin waxayna doonayaan in “caruurtooda dib ay ugu noqdaan dalalkii ay ka tageen ama la geeyo Soomaaliya”.
Qaar ka mid ah gabdhahaas ayaa ka soo muuqanaya warbaahinta caalamka, kuwana iyaga ayaa si toos ah ula xiriiray waalidiintooda. Xeryaha ay ku jiraan badankooda waxaa maamula Kurdiyiinta Suuriya.
Gabdhahan ayaa markii hore haystay dhalashooyin u badan wadamada reer galbeedka, balse caqabadda ugu weyn ee ay wajahayaan waxa ay tahay in dalalkii ay ka yimaadeen qaarkood ay soo saareen shuruuc u diidaya in ay dib u noqdaan.
Sida ay sheegeen waalidiinta, waxaa ku sii kordhay walwalka iyagoo ka cabsi qaba in caruurtooda aysan helin dal ay dib ugu noqdaan.
“Waxay ka badbaadeen dagaalka Suuriya, haddana ma lahan meel ay ku noqdaan oo ay dib uga billaabaan nolol cusub”.
Waalidiin hadda isu yimaaday oo gaaraya illaa 40, waxay dhiseen guddi ay doonayaan in uu ka shaqeeyo u gurmashada caruurtooda oo “ay ka deyrinayaan xaaladda ay ku nool yihiin”.
Guddoomiyaha ururka waalidiinta sidaa Yaasiin Maxamed Xasan oo la hadlay BBC Somali ayaa sheegay “in ay dhammaantood dareemayaan in ay ka maqan yihiin caruur maxkaxda laga badalay”.
“Inta badbaaday way u suurta galiwayday in ay soo noqdaan. Waxa isugu imaanay in aan la xariirno dawladda Soomaaliya si ay gacan inooga siiso sidii caruurtan dib loogu celin lahaa dalka Soomaaliya, maadaama aysan ku soo noqon karin dalalkii ay dhalashooyiinka ka hasyteen,” ayuu yiri Yaasiin.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilli aan sidaa u fogeyn sheegtay in “Soomaaliya ay ku dadaaleyso sidii dhallinyaradaas looga soo qaadi lahaa Suuriya”, sida BBC uu u sheegay safiirka Soomalaiya ee Belgium u fadhiya.
“Waalidiin badan ayaa nala soo xiriiray, waxayna inoo sheegeen in dhibaatooyiin badan ay caruurtooda ku wajahayaan” xeryaha qaxootiga ee Suuriya.
ONLF Oo Shuruud Ku Xidhay Inay Ka Qayb-gasho Doorashooyinka Itoobiya Ee La Filayo Inay Sannadka Dambe Qabsoomaan
Maxaan uga been sheegnaa howlgabnimada?